पिसिआर रिपोर्ट नहुँदा उनले पाएनन् अस्पतालमा भर्ना, मृत्युपछि बल्ल परीक्षण :: Setopati
विनोद सापकोटा झापा, साउन २७
फुटबल खेल्दा बलले छातीमा लागेर घाइते भएका झापाको कनकाई नगरपालिका–५ का १७ वर्षीय रोशन सुनारको निजी अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा मृत्यु भएको छ।
निजी अस्पतालहरुले घाइतेको पिसिआर रिपोर्ट चाहिने भन्दै भर्ना नगरी एकबाट अर्कोमा जान सुझाउँदा सुझाउँदै सुनारले ज्यान गुमाए।
४ दिन अघि साथीहरुसँग फुटबल खेल्ने क्रममा सुनारको छातीमा बलले लागेको थियो। छातीमा बलले लागेपछि घरमै आराम गरिरहेका उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गयो। स्थानीय क्लिनिकको औषधि खुवाउँदा उनको दुखाई बीसको उन्नाइस नभएपछि सुरुङ्गाको मेरिगोल्ड हस्पिटलमा भर्ना गरिएको थियो।
मेरिगोल्ड अस्पतालले उनको अवस्था गम्भीर भएको बताएपछि थप उपचारका लागि विर्तामोडको विर्तासिटी अस्पतालमा आफन्तले लगे । त्यो बेला उनको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिन थालेको थियो।
कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका गरेर विर्तासिटी अस्पतालले पिसिआर रिपोर्ट माग्यो। उपलब्ध नगराए उपचार गर्न नसकिने भन्दै अस्पतालले मृतकका आफन्त तेजबहादुर मुखियालाई जानकारी गरायो।
विर्तासिटीमा बिरामीकाे भर्ना नभएपछि विर्तामोडकै कनकाई अस्पतालमा उपचारका लागि आफन्तले लगे। त्यहाँ पनि पिसिआर रिपोर्ट मागिएको मुखियाले बताए।
कनकाई अस्पतालले पनि पिसिआर रिपोर्ट नभएसम्म उपचार नगर्ने भनेपछि आफन्त आत्तिएका थिए, जतिबेला सुनारको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो।
‘यी अस्पतालले पिसिआर रिपोर्ट नभएकाे भन्दै उपचार नगरेकै कारण ढिलाई भएर बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्यो,’ मृतकका भिनाजु नाताका मुखियाले भने, ‘अस्पतालहरुकाे कोरोना त्रासले नै बिरामीकाे ज्यान गएको हो।’
आफन्तजन भने पिसिआर परीक्षणाकाे साटाे एकबाट अर्काे अस्पताल लैजानमै केन्द्रित भए।
मंगलबार बिहानको रात करिब २ बजेतिर उनलाई लिएर अभिभावक मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर पुगे। मेची अस्पताल भद्रपुरले भर्ना गरेर उपचार शुरु गरेको थियो। तर केही क्षणपश्चात शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै गएपछि उनलाई भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार चाहिएको आफन्तलाई सुनाइयो।
मेची अस्पतालमा उक्त सुविधा नभएपछि भेन्टिलेटरका लागि भद्रपुरकै ओम साई पाथिभरा अस्पतालमा सुनारलाई रिफर गरियो । त्यहाँ पनि पिसिआरकै रिपोर्ट मागेपछि अभिभावक फेरि मेची अस्पताल नै पुगे। त्यहाँ इमरजेन्सी कक्षमा उनको मृत्यु भएको मेची अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द कँडेलले जानकारी दिए।
मृतक सुनारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ/छैन भनेर परीक्षण गर्नका लागि स्वाब संकलन गरिएको र चाँडै नै रिपोर्ट आउने डा. कँडेलले बताए। पिसिआर रिपोर्टविना निजी अस्पताले भर्ना नलिएकै कारण रोशनको मृत्यु भएको आफन्तजनको गुनासो छ।
रिपाेर्ट नआएसम्म उनको शव मेची अस्पतालमै राखिने भएकाे छ।